Fihinanana tsakitsaky :: Olona manodidina ny valopolo ahiana ho voapoizina ara-tsakafo • AoRaha
Ahiahina fanapoizinana ara-tsakafo. Olona manodidina ny valopolo no voalaza fa narary noho ny fihinanana tsakitsaky, toy ny ovy endasina sy karazan-tsakafo hafa, teny Bemasoandro Itaosy, araka ny tatitry ny Zandarimariam-pirenena, eny an-toerana. Saika nanatona tobim-pahasalamana sy mpitsabo avokoa ireo marary rehefa nahatsapa fa tsy netinety taorian’ny fihinanana sakafo teo amin’ity mpivarotra iray ity.
“Mangorangorana, mandoa sy mivalana, marary an-doha, mangovitra sy ny sisa no tsapa tamin’ireo marary tonga tato amiko. Fambara amin’ny trangana fanapoizinana an-tsakafo avokoa ireo”, hoy ny dokotera Rakotobe, iray tamin’ireo mpitsabo nandray ny ampahany tamin’ireo marary. Voalazany fa tamin’ny talata ireo marary no nilaza fa nihinana an’ilay sakafo saingy afak’omaly vao tonga tao aminy nitady fitsaboana.
Nosamborina sy nanaovana fanadihadiana avy hatrany ny tompon’ny fivarotana, araka ny fantatra. “ Efa notazonina ato aminay mihitsy izy satria nisy ny fitarainana nalefan’ny mponina izay voasonian’ny olona maro”, hoy Ranariarisoa Olivier, lehiben’ny Borigadin’ny Zandarimariam-pirenena, eny Itaosy. Nakatona avy hatrany ihany koa ilay trano fivarotana araka ny fanampim-panazavany. “ Nangatahana taratasy avy amin’ny kaominina ny fanatanterahana an’izany”, hoy izy.
Tsy fantatra mazava ny akora niteraka ny tsy fahasalamana tamin’ireo olona am-polony ireo raha ny fanampim-panazavan’ny zandary. Samy nanana ny filazany rahateo ireo olona nanana fianakaviana niharan’ny aretina. Misy ireo milaza fa noho ny menaka nampiasain’ilay mpivarotra no nahatonga an’io tranga io.
“Nalefa nanaovana fanadihadiana any amin’ny laboratoara ny ampahany tamin’ireo sakafo ireo mba hahafantarana ny tena marina mikasika an’izany”, hoy indray Raniriarisoa Olivier. Nisy tamin’ireo marary no voalaza fa tsy maintsy nentina niakatra teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha no notsaboina, tany amin’ny CSB Bemasoandro sy hopitaly Itaosy kosa ny hafa.